वडादशैंको नवरात्रमा नवदुर्गाको पूजा : कुन दिन कसको ? यस्तो छ शास्त्रिय मान्यता – Etajakhabar
वडादशैंको नवरात्रमा नवदुर्गाको पूजा : कुन दिन कसको ? यस्तो छ शास्त्रिय मान्यता
काठमाडौँ – वडादशैंका नवरात्र अन्तर्गत पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौं दिन स्कन्दमाता, छैठौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्री, आठौं दिन महागौरी र नवौं दिन सिद्धिदात्रीको पूजा आराधना गरिन्छ । नौवटा दुर्गाका रुपलाई नवदुर्गा भनिन्छ । दुर्गादेवीले आसुरी एवं राक्षसी प्रवृत्तिबाट मानवलाई जोगाएकाले समस्त मानव जातिले नै पूजा आराधना गर्ने शास्त्रीय नियम छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, आश्विन २४, २०७५ समय: ९:३४:०६